Tsy milamina | 102 KARA
Tenin-jatovo fandre matetika io, rehefa mivaralila na misahotaka na misavorovoro ny zava-miseho iray. ary dia izay : » TSY MILAMINA » izay no azo ilazana ny toe-draharaha misy eto amin’ny Firenena ankehitriny.
Tsy hilaza ny fitarainan’ny olona isika mikasika ny fisian’ireo vahiny avy hatrany dia mitrandraka harena an-kibon’ny eny amin’ny tany famokaran’ny tantsaha. Marobe izany ankehitriny amin’ny faritra maro eto Madagasikara ka mampikaikaika tokoa ny vahoaka, satria mivadika ny rasa, ka ny vahiny indray no manjakazaka amin’ny tanin’ny gasy.
Fa izao faraparany izao indrindra ihany koa dia NAFOTAKA ny fitokonana :
Teo aloha ny an’ny SMM na ny sendikan’ny mpiasa. Omaly dia niditra an-keriny tao amin’ny Lapa fitsarana tao ANOSY ny mpitandro filaminan’ ny EMMOREG nanapotika ny rojo hidin’ny vavahady. Ary androany aza moa dia tsy navela hiditra tao am-piasana ny mpitokona ary tsy nomena na dia seza aza hipetrahany eny ivelany. Tsotra anefa ny fitakian’ny mpitsara izay miaraka amin’ny mpiandraiki-draharaha sy ny mpitan-tsoratra avy amin’ny tribonaly manerana ny nosy dia : NY TSY ITSABAHAN’NY MPITONDRA MPANATANTERAKA amin’ny raharahan’ny fitsarana ka hananany ny tena FAHALEOVAN-TENANY ary koa ny fampiaharana ny didim-pitsarana amin’ireo voaheloka.
Etsy an-kilan’izany koa dia nitokona ny mpianatra tao amin’ ambaratonga ambony tany TOAMASINA omaly satria tsy voaloa ny vatsim-piainaran’ireo mpianatra 2600. Etsy an-kilan’izany anefa dia niakatra koa ny vola fandoa amin’ny fidirana na ny droit d’entrée. Ary manampy trotraka izany rehetra izany dia tsy mbola nahazo trano koa ireo mpianatra. Efa tamin’ny 21 Aogositra 2014 no nambara fa enim-bolana ihany dia ho vita ny trano natokana ho an’n y mpianatra. Efa vita indray izy izao kanefa dia tsy mbola azo tsinjaraina satria mbola tsy misy jiro sy rano. Dia nihoraka mihintsy ny mpianatra fa « TSY MILAMINA » izany rehetra izany.
Ireo aloha nandritr’izao roa andro farany izao no raharaha mafampana ka iandrasana ny fandraisan’andraikitry ny Fitondrana kanefa dia toa mitampi-tsofina sy manao be marenina fotsiny ny Fitondrana, ka ny maniraka mpitandro filaminana hitoraka baomba mandatsa-dranomaso no atao no sady mandrangaranga ny fitaovam-piadiana eny am-pela-tanàny, toy ny efa fahita hatramin’izay raha vao misy MBA FIHETSIKETSEHANA na FANEHOAN-KEVITRA avy amin’ny vahoaka. Ka tsy izany ve no atao hoa : « » DIDY JADONA ?………TENA TSY MILAMINA E !
1 octobre 2017 - 18 h 24 min Politique 243 vues